FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY BOSTON TERRIER - ALIKA
PJ ny Terrier any Boston amin'ny faha-3 taonany
baw-stuh n ter-ee-er
I Boston Terriers, antsoina koa hoe Boston Bulls, dia alika voafintina sy mihetsika tsara. Fohy ny vatana ary miseho toradroa ny endriny. Ny loha toa ny kianja dia fisaka eo an-tampony ary mifanaraka amin'ny ambin'ny vatana. Ny vava lalina sy malalaka ary fohy dia mitovy amin'ny loha. Mainty ny orona. Voafaritra tsara ny fijanonana. Ny manaikitra dia na somary ambany kely aza, manome ny volomaso ny endriny toradroa. Ny maso lehibe, boribory sy mainty dia masaka be. Kely ny sofina miorina ary na voajanahary na avela voajanahary. Mahitsy sy hozatra ny rantsambatana. Somary mivelatra ny tongotra ary malalaka ny tratra. Somary arched ny hatoka. Ny rambony ambany sy miolakolaka dia fohy ary na mahitsy na miendrika visy ary tsy miantsona mihitsy. Ny palitao fohy sy miloko mirindra dia tonga amin'ny tombo-kase, brindle sy fotsy, mainty sy fotsy ary ny sasany teraka fotsy sy fotsy.
Ny Boston Terrier dia malemy paika, mailaka, tena marani-tsaina, tsara fitondran-tena ary be zotom-po. Raha tsy misy ny isan'ny fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana mety hanjary tsy ho simba ary somary avo lenta. Tena mora tohina amin'ny feon'ny olona iray izy ireo. Tian'i Boston ny mianatra ary noho izany dia tsy sarotra ny mampiofana . Ny faharanitan-tsain'izy ireo dia manome antoka fa haka zavatra haingana izy ireo. Raha ny olombelona manodidina ny alika Aza aseho ny fitarihana izay ilain'ny alika rehetra, ho tonga fanahy iniana izy ireo rehefa manomboka mino fa mihazakazaka ny fampisehoana izy ireo ary mila milaza aminao izay tokony hatao. Aza avela hivoatra ny Boston Terrier Syndrome kely alika , fitondran-tena entin'ny olombelona izay inoan'ny alika fa misy azy mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Izany dia mety hiteraka ambaratonga samihafa olan'ny fitondran-tena . Mila am-pitiavana nefa matanjaka, matoky tena mpitarika fonosana tsy miova iza no mahay mampiseho ny fahefana amin'ny alika. Ny voajanahary dia ny fananana mpitarika matanjaka ary ity zazalahy kely ity dia tsy ankanavaka amin'ny lalàna. Na ny zanak'olombelona dia io mpitondra io, na ny alika. Ny tompon-trano sasany dia nitatitra fa ny alik'izy ireo dia mpiambina tsara, miondrika raha tsy ilaina izany, raha misy kosa ny tompona hafa dia nilaza fa ny vehivaviny Boston Terriers dia tsy mivily eo am-baravarana mihitsy. Azo itokisana indrindra amin'ny ankizy, indrindra amin'ny olon-dehibe sy tena sariaka miaraka amin'ny olon-tsy fantatra, ny Boston Terrier dia milalao, be fitiavana ary tiany ho anisan'ny fianakaviana. Tena malaza any Etazonia, noho ny toetrany tsara indrindra, dia mifanakaiky amin'ny biby fiompy tsy kaninina izy ireo amin'ny ankapobeny. Raha tsy misy ny fitarihana mety avy amin'ny olombelona mampita amin'ny alika ny fitondran-tena ekena sy ny tsy mety dia afaka manjaka izy ireo ary mety hiady amin'ny alika hafa. Mety ho sarotra ireto alika kely ireto tranom-bahiny .
Hahavony: 15 - 17 santimetatra (38.1 - 43 cm)
afangaro amin'ny laboratoara mainty sy mavo
Milanja: 10 - 25 pounds (4,5 - 11,3 kg)
Mora voan'ny olana ara-maso, toy ny katarakta zaza, katarakta tara, entropion, distichiasis, glaukoma, tsiranoka kornea, vay kornea, maso serizy , maso maina (Keratitis Sicca). Ny mason'ilay Boston Terrier dia mora voan'ny ratra. Ary koa, ny marenina, ny fivalanan'ny patellar, ny fivontosan'ny fo sy ny hoditra, ao anatin'izany fivontosan'ny sela . Ireto alika fohy volo ireto dia mety manana olana amin'ny fifohana rivotra rehefa tratry ny fiezahana mafy amin'ny andro mafana na mangatsiaka ary mety hafanana be raha atosika mafy loatra izy ireo. Mety hikorontana na hiala tototra koa izy ireo. Matetika dia sarotra ny mandehandeha satria tery ny valahana, ny pups be loha matetika dia atolotry ny fizarana cesarean.
Boston Terriers dia tsara ho an'ny trano sy ny firenena. Tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano ary manao tsara raha tsy misy tokotany. Ity karazana ity dia marefo amin'ny toetr'andro tafahoatra.
ny dia an-tongotra lavitra isan'andro ary ny seha-pilalaovana maimaimpoana ao an-tokontany misy fefy voafetaka no ilain'ny Boston Terrier hijanona amin'ny endrika milamina. Maivana ihany izy ireo ary mora entina.
afovoan-tany terrain chihuahua afovoany
Manodidina ny 15 na mihoatra ny taona
Ankizy kely 3 - 4 eo ho eo noho ny lohan'ity karazana ity dia mahazatra tokoa ny fahaterahan'ny caesarea
hareza sisin'ny Malagasy pitbull terrier
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Afangaroy sy borosio amin'ny borosy lava volo ary mandro raha tsy ilaina. Sasao amin'ny lamba mando isan'andro ny tarehy ary diovy tsara ireo maso malaza. Hamarino na ny sofina na ny maso ny masomboly ahitra. Mety hidona ao an-tsofina ihany koa ny kitapo. Tokony hohetezina indraindray ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony ary tsy manana fofona doggie mahery.
Nihalehibe ny haben'ny alika mpiady an-davaka misy ny karazana omby sy tertera, nilanja hatramin'ny 20 kilao (20 kg) ny tany am-boalohany i Boston Terrier ( Olde Boston Bulldogge ). Sarotra ny hino fa ireo alika kely maotina ireo dia mpiady mahery vaika taloha. Raha ny marina, ny sokajy lanjany dia nozaraina ho maivana, afovoany ary lanjany. Avy any an-tanànan'i Boston, Massachusetts, ny Boston Terrier dia iray amin'ireo karazany vitsivitsy novolavolaina tany Etazonia. Ny Boston Terriers tany am-boalohany dia lakroa teo anelanelan'ny English Bulldog ary ny ankehitriny lany tamingana English White Terrier . Manodidina ny 1865, ny mpanazatra nampiasain'ny olona nanankarena tao Boston dia nanomboka nifangaro tamin'ny alika sasany an'ny mpampiasa azy ireo. Ny iray amin'ireo hazo fijaliana ireo, teo anelanelan'ny anglisy White Terrier sy ny English Bulldog, dia niteraka alika iray antsoina hoe Hooper's Judge. Milanja 13,5 kilao ny lanjan'ny mpitsara. Nihalehibe tamina habe vavy kely kokoa izy ary ny iray tamin'ireo zanak'alika ireo dia nateraka ho vavy kely kokoa. Ny zanak'izy ireo dia nifampiraharaha tamin'ny Bulldog frantsay iray na maromaro, izay manome ny fototra ho an'ny Boston Terrier. Tamin'ny taona 1889 dia lasa nanjary be mpitia tany Boston ny mpamboly, nanangana ny American Bull Terrier Club, saingy io anarana natolotra io dia tsy tian'ny mpitia Bull Terrier. Tsy tian'izy ireo koa ny anaram-bosotra, 'Roundheads.' Fotoana fohy taorian'izay dia nomena ny anarana hoe Ter Terra Boston ny toerana nahaterahany. Ny karazany dia neken'ny AKC tamin'ny 1893. Naseho voalohany tany Boston tamin'ny 1870. Tamin'ny taona voalohany dia tsy dia tena zava-dehibe ny loko sy ny marika fa tamin'ny taona 1900 dia nosoratana ho fenitra ny marika sy ny loko mampiavaka azy. Terrier amin'ny anarany fotsiny, ny Boston Terrier dia nibolisatra tamin'ny alika mpiady lavaka taloha.
Mastiff, AKC Tsy Fanatanjahantena
Ben the pupster Boston Terrier amin'ny 9 herinandro
Kali the Boston Terrier amin'ny faha-5 taonany— 'Nanapa-kevitra ny tsy hanana alika intsony aho rehefa tonga i Kali. Ny tompony teo aloha dia tsy maintsy nifindra tampoka tamin'ny fanjakana ary nila trano i Kali. Nanapa-kevitra aho fa hitandrina azy mandra-pahitako trano vaovao. Roa taona lasa izay. Nahita trano vaovao teo izy niaraka tamiko. Tsy mahazatra Terry any Boston izy. Mangina izy ary tia matory. Hilalao mandritra ny fotoana kelikely izy nefa avy eo reraka ary mandeha matory. Mahafantatra fika vitsivitsy izy. Ny ankafiziny dia ny fiakarana amin'ny latabatra ambony latabatra mba hangalatra sakafo. Tsy fitaka tiako io. '
Tater ny Boston Terrier amin'ny faha-7 taonany
PJ amin'ny 10 herinandro
'Sheeba no fifaliako amin'ny fiainako! Tena miasa izy, tia miditra an-tongotra (indrindra eny amoron-dranomasina ahafahany mihazakazaka sy milalao amin'ny fasika), tia milalao kilalao, fa ny ankamaroany dia tiany ny mihetsika. Ataoko izay hihazonana azy ho mavitrika, mahavelona ary tena tiana. '
helo-drano chesapeake retriever laboratoara Mix alika kely
'Tiako ny mijery ny seho an'i Cesar Millan satria manampy ahy hahatakatra izany behavours sasany mba hitady sy ny fomba hanitsiana azy ireo hahazoana antoka fa samy faly izahay sy Sheeba! Mianatra ny tsara fifandraisana amin'ny alikao fomba iray ahazoana ny finamanana tsara indrindra. '
'Ireto ny zanako keliko ao amin'ny Boston Terrier, i Oliver sy Clementine (rahavavy ankavia, rahalahiko havanana) amin'ny 10 herinandro. Ao an-tranonay eo ambony fipetrahan'ny efitrano fandraisam-bahiny izy ireo. Satria alika fianakaviana lehibe tokoa i Boston Terriers, dia manantena izahay ny hampiasa azy ireo ho alika fitsaboana. Ny Labanay 3 taona manana fahalalam-pomba tsara dia nampiasa ny fahefany sy ny fomba malefaka hanao ny ankamaroan'ny fiofanana ho an'ny alika kely - tena manome modely ny fitondran-tenany tsara izy ireo. Tsy nianatra nitsambikina tamin'ny fanaka izy ireo ary tonga rehefa nantsoina — mandeha amin'izay alehan'ny Labanay izy ireo. Miezaka mihazona angovo an-trano mandanjalanja sy milamina izahay satria hitanay ny fiantraikan'ny angovo tsy voalanjalanja sy ny fiahiahy amin'ny alika sy ny hafa. Mpino mafana fo amin'ny teknikan'i Cesar Millan izahay, ary manao izay fara herinay hitazomana trano falifaly misy fetra ho an'ny alikanay! Misaotra dogbreedinfo.com tamin'ny fizarana sary sy toetra marobe amin'ny purebreds sy ny karazany rehetra! '
jack russell terrier mifangaro karazany
Daisy ilay mena sy fotsy tertera any Boston
Oscar the Boston Terrier amin'ny 2 taona - hoy ny tompony, 'Boston mavitrika tokoa izy. Tiany ny kilalao ary milalao miaraka amin'i Belle, mpiara-milalao aminy Bulldog frantsay. '
Zigzag the Boston Terrier amin'ny 2 taona - hoy ny tompony, 'Alika marani-tsaina toy izany izy. Mahafantatra tetika 30 isan-karazany izy, toy ny mandihy sy mitaingina skateboard. '
Buddy the Boston Terrier amin'ny 1 taona
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Terrier any Boston
Boston Terrier Sary 1
Boston Terrier Sary 2
Boston Terrier Sary 3
Boston Terrier Sary 4
Sary Boston Terrier 5
Ny sary Boston Terrier 6
Alika Terrier any Boston: Sarivongana Vintage azo angonina
kilalao poodle sy mixer spaniel
sary mix mix shih tzu terrier
Mastiff anglisy 4 volana
zanak'ondry terry boston mainty rehetra
antsasaky poodle antsasaky retriever volamena